Fampianarana - Mag tsy mampino
Fanontaniana mila apetrakao alohan'ny hisoratanao anarana amin'ny Google Merchant Feed
Miaraka amin'ny tranokala E-commerce an-tapitrisany mivarotra an-tserasera, ahoana no ahatongavan'ny vokatrao eo an-tampony? Eo no manampy ny fahana mpivarotra google woocommerce. Raha mbola tsy naheno an'izany ianao dia diso anjara amin'ity fifaninanana an-tserasera ity. Amin'ny alàlan'ity…
Boky teknolojia tsy maintsy vakiana afaka manova ny sainao
Ao amin'ny bokiny "The Better Angels of Our Nature", Profesora Harvard Steven Pinker dia nilaza fa ny tontolo ankehitriny dia azo lazaina fa milamina indrindra. Manome fanantenana ny boky hanovana ny sain'ny olona fa na eo aza ny tsy fandriam-pahalemana ara-politika, ny fiovan'ny toetrandro ary izay zavatra hitanao…
Boky tsara vitsivitsy hianarana momba ny fanomanana fanadinana CEED
Fa maninona no CEED 2020? Fanadinana fidirana mahazatra ho an'ny famolavolana na malaza kokoa amin'ny hoe CEED dia fanadinana fidirana izay karakarain'ny Institute of Technology Indiana (IIT) Bombay. Ny mpifaninana mendrika amin'ny fanadinana CEED dia heverina ho mendrika hiditra ao amin'ny Master of Design (M.Des)…
Mamaha ny taratasy fanontanina matematika kilasy faha-6 miaraka amin'ny fanamorana
Mahatsapa ho sarotra amin'ny famahana ny matematika kilasy 6 ve ianao? Ambany dia ambany ve ny matematika ataonao? Ny taranja matematika dia iray amin'ireo taranja tena ilaina amin'ny fampianarana ambaratonga faharoa. Raha tsy manana fototra matanjaka amin'ny matematika kilasy faha-6 ianao dia ho bebe kokoa…
Ny fahaiza-manao analytics tsara indrindra hampisondrotra ny resume!
Novambra 3, 2019
Ny fitomboan'ny fangatahana nomerika sy ny automatisation dia nahatonga ny sehatry ny tombony toa ny analytics data, science science ary ny injenieran'ny data Big. Ny asa amin'ny sehatra toy izany dia tsy vitan'ny manolotra fonosana karama be ihany fa koa fotoana mety amin'ny fitomboana sy filaminana. Amin'ny fotoana mahazatra…
VAKIO IZAO MBA HAHITANA NY PLAYCHOOL tsara indrindra any GURGAON
Play School no dingana voalohany ianarana amin'ny zaza rehetra, ary ny ray aman-dreny rehetra dia maniry ny zavatra tsara indrindra ho an'ny zanany na kilalao, akanjo na sekoly ho an'ny fanabeazana. Playschool dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fananganana ny fototry ny ankizy,…
Toro-marika fanadinana tena ilaina ho an'ny mpianatra Matematika CBSE kilasy 9
Miaraka amin'ny fitomboan'ny fifaninanana dia ny mpianatra no tokony hianatra mafy sy hahazo naoty ambony amin'ny fanadinana. Tena zava-dehibe ny kilasy 9 ary mila manana fanoloran-tena mety ianao mba hahafahanao mandalo ny fanadinana amin'ny loko manidina. Ny fampiasana…
Diovy ny toerana maro karazana amin'ny fomba tsara indrindra
Marihina eto fa betsaka ny maso ivoho mpanadio vonona hanadio toerana isan-karazany. Fa tsy izy rehetra no atoro anao. Izany dia satria, ny sampan-draharaha mpanadio sasany dia tena lafo na tsy mahatratra ny marika fotsiny. Na izany aza,…
Antony 5 lehibe mahatonga ny HR ho tena ilaina amin'ny fikambanana iray
Raha manadihady ny firafitry ny fandaminana maoderina ianao dia ho hitanao fa tsy miova ny fisian'ny HR. Na orinasa kely na lehibe io dia tsy adinon'izy ireo ny nanokana departemanta ho an'ny HR. Mahita an'ity fiakarana takian'ny HR ity, Human…
Fa maninona no mitombo ny lanjan'ny data Big eto India?
Androany, ampaham-bahoaka mitombo isa amin'ny vahoaka Indiana marobe no mampiasa sehatra nomerika isan-karazany. Miroborobo ny toekarena nomerika eto amin'ny firenena ary ny sehatra toa ny eCommerce, IT ary Banking dia mandray ny vahaolana teknolojia nomerika. Na ny governemanta sy ny mpanao politika aza dia miorim-paka amin'ny fitadiavana data…
1 2 3 ... 10 Manaraka